मदन खरेलको बदमासीले वायुसेवा निगम धरापमा, कदम–कदममा भ्रष्टाचार ! - Nepal's Digital News Paper
मदन खरेलको बदमासीले वायुसेवा निगम धरापमा, कदम–कदममा भ्रष्टाचार !
‘उहाँले सबै शाखा प्रमुखलाई खाली कागजमा सही गराउनुभयो र आफैं कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुभयो’, निगमका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘खाली कागजमा सही गर्न नमान्ने शाखा प्रमुखलाई कारबाहीको चेतावनी दिनुभएको थियो ।’
काठमाडौं । न्यारो बडी विमान घोटालामा मुछिएका नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले काण्डै काण्ड मच्चाउन थालेका छन् । न्यारो बडीमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका खरेलले पदको दुरुपयोग गरी एकपछि अर्काे आर्थिक अनिमितता गरेको खुलेको छ ।
विभागीय मन्त्रीलाई थाहा नदिई केही समयअघि आर्थिक लाभ लिएर उनले निगमका २३ कर्मचारीलाई विदेश शाखामा सरुवा गर्न लागेका थिए । उक्त शाखामा सरुवाअघि कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिन्छ । तर, खरेल आफैंले कर्मचारीको मूल्यांकन गरी सरुवाको तयारी गरेको एक कर्मचारी बताउँछन् । निगमको नियमावलीअनुसार भने शाखा प्र्रमुखले कर्मचारीको मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था छ । खरेलले कुनै पनि शाखा प्रमुखलाई आफू मातहतका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न नदिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
शाखा प्रमुखसँग खाली कागजमा सही गराएपछि खरेलले आफूखुसी मूल्यांकन गरेका थिए । ‘नजराना’ चढाएका र आफूनिकट कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा ५ नम्बर दिएका छन् । अन्य राम्रो कार्यसम्पादन भएकालाई २ नम्बर दिएका छन् । कार्यसम्पादनका आधारमा जापान, हङकङ, थाइल्यान्डसहित विदेशका सात शाखामा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रावधान छ ।
निगमभित्र प्रशासन, प्राविधिक र लेखा शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीको मूल्यांकन उनले यसरी नै गरेका छन् । उनले गैरकानुनी काम गरेपछि कतिपय कर्मचारीले विभागीय मन्त्री योगेश भट्टराईलाई जानकारी गराएको स्रोत बताउँछ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री भट्टराईले छानबिन गर्ने आश्वासन दिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।
खरेल अध्यक्ष नियुक्त हुँदा निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न दुई विमान थिए । केही समयपछि थप दुई विमान आए । अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने विमानको संख्या चार पुगेको छ । तापनि, खरेलले उडानका गन्तव्य निश्चित गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण निगम दैनिक घाटामा गइरहेको छ । उनले गन्तव्य खोज्नुभन्दा तय भएकामा पत्र पठाएर उडान रोक्ने प्रयास गरेका छन् ।
केही समयअघि जापानको नारिता र हानिदा उडानको तयारी थियो । उनले नारितामा जसरी पनि नेपाली विमान उडाउने ‘गफ’समेत दिइरहेका छन् । तर, ८ फेब्रुअरीमा खरेलकै निर्देशनमा निगमले नारिता उडान गर्ने योजना रद्द भएको पत्र पठाएको तथ्य खुलेको छ । जापानको सिभिल एभिएसन ब्युरोलाई पठाएको पत्रमा नारिता र हानिदामा उडान योजना नरहेको उल्लेख छ । खरेलले नै नारिता र हानिदा उडान रद्द गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विमान तत्काल उडाउन खरेललाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई गुमराहमा राखेर खरेलले जापानको सिभिल एभिएसनलाई पत्र पठाएको तथ्य खुलेको छ । ‘यो विषयमा मलाई थाहा छैन’, मन्त्री भट्टराईले भने, ‘यस्तो गैरजिम्मेवार पत्र निगमबाट गएको हो भने म कारबाही गर्न तयार छु ।’
तर, निगमको पत्रमा लेखिएको छ, ‘जापानको नारिता र हानिदा विमानस्थलमा चार्टर तथा नियमित उडानको कुनै योजना छैन ।’ खरेलले लामो दूरीका विमानलाई छोटो र बढी प्रतिस्पर्धा हुने स्थानमा उडान भरिरहेका छन्, जसबाट निगमलाई घाटा भइरहेको छ ।
उनी अध्यक्ष हुँदा आन्तरिक उडानतर्फ आठ विमान थिए । ती अधिकांश ग्राउन्डेड छन् । ग्राउन्डेड विमान मर्मतका लागि करोडौ रकम खर्च भएको तथ्य निगममा देखिन्छ । तापनि विमानले उडान भरेका छैनन् । मर्मतका नाममा कमाई खाने भाँडो बनाएको चर्चा निगममा छ ।